Isifundo se-Izingxenye zokuQonda
Izakhi ezintathu eziletha ukuqonda kwanoma yini nokuthi zihlobana kanjani
Amathuluzi aqondile owadingayo ukwandisa ukuqonda kwakho nawo wonke umuntu omaziyo nezwe elikuzungezile.
Amashalofu okuzithuthukisa ezitolo ezidayisa izincwadi, amaza omoya kanye nezikhulumi zokuzisiza ezihambela isekethe yezifundo zonke zinikeza izixazululo eziningi zezinkinga zokuqonda impilo. Nokho-ke ukusakazeka okungapheli kobunzima bomuntu kusalokhu kungalungiseki.
Kulesi sifundo, u-L. Ron Hubbard uhamba ngaphansi kwazo zonke lezi “zixazululo” zokunikeza ulwazi oluyisisekelo lokuthi yini empeleni eyakha ukuqonda.
Ungenzani ngalolulwazi? Ngokwazi ukuthi kuyini ukuqonda ngempela, unamathuluzi okuphatha impilo uqobo. Lokhu kusho ukuthi unamathuluzi okwandisa ukuqonda kwakho kwanoma yini—kufaka phakathi abantu obaziyo futhi oxhumana nabo.
Lolulwazi luzokusiza ukuthi usize abanye ababhekene nobunzima obudalwa ukungaboni ngaso linye, imibono eyahlukene, ubudlelwano obephukile nezinye ezenza impilo yomuntu ibe uchungechunge lobunzima obulandelanayo. Uzofunda izingxenye zokuqonda, ukuthi zihlangana kanjani futhi ziletha ukuqonda. Ngamakhono umuntu angawathola ekutadisheni izisekelo eziqukethwe lapha, ungasiza ukubuyisela abanye ekuqonda nabantu abakanye nabo kanye nezwe elibazungezile.
Yize ukuphela kwengxenye yobuchwepheshe obugcwele uMnu Hubbard abkhile kulesifundo buqukethwe lapha, kwanele ukushintsha indlela yakho yokuphila. Futhi ukusetshenziswa kwabo kuzokusiza uchume kunoma yisiphi isigaba sokwenziwa ngabantu.
Uma ukuntuleka kokuqonda, kungumthombo wezinkinga zomuntu, cabanga ngamakhono akhe ngaphandle kwalesi sithikamezo. Izigidi zabantu abasebenzisa lolulwazi bafinyelela ezindaweni eziphakeme ababeke baphupha nje ngazo—futhi basiza ngempumelelo abanye ukuba benze okufanayo.
Amahora amane. Kodwa ke, ungasenza le sifundo ngejubane lakho. Ngamanye amagama, akwanele. Isifundo lesi siyinsizakalo yethu kuwe, mahhala.
Incwajana Izingxenye zokuQonda
Lapho sekuqediwe Isifundo se-Izingxenye zokuQonda, uzothola isitifiketi nge-email.
“Ngiyaziqhenya ngokusho ukuthi sengiqedile isifundo I-Components of Understanding enikezwa Ngamavolontiya Ministers. Lesifundo singisize kakhulu empilweni yami yansuku zonke. Ekufundeni imigomo yokusondelana, iqiniso nokuxhumana, manje sengikwazi ukuxhumana nanoma ngubani ngokukhululeka. Ngisebenza umsebenzi lapho ukuxhumana okuhle kubalulekile, kepha ngibonile ukuthi ukukhulisa ukuxhumana kusiza yonke ingxenye yempilo yami. Cabanga ngomhlaba lapho wonke umuntu enekhono lokuxhumana. Yeka ukuthi bekungaba ngcono kanjani ukuhlala ezweni elinjalo!
“Ngaphambi kokuthatha lesi sifundo, nganginenkinga enkulu emsebenzini. Inkampani engiyisebenzelayo ibibhekene nezinguquko ezithile ebezingaziphathi kahle kubaphathi bethu. Ukuba umphathi kule ndawo, ngangithwele kanzima ngokunganeliseki kwabo. Ingcindezi yalezi zingxoxo nabantu ibingiqeda kuze kube seqophelweni lapho bengingacabangi ukuthi ngingaqhubeka emsebenzini wami wamanje. Ngishayele inombolo yamahhala ye-Volunteer Ministers ukuze ngixhaswe, futhi ngaqondiswa kulesifundo ikakhulukazi.
“Ngemuva kokuthatha lesi sifundo, ngibonile ukuthi ngivame ukugwema ukungaqondi kanye nodweshu. Kube khona izikhathi lapho ngingethulwe khona umuntu othukuthele futhi kuthi ekugcineni kwengxoxo lowo muntu angibonge! Manje yilokho engikubiza ngokuthi ukunqoba!
“Kukonke, kusukela kulesi sifundo, ukuxhumana kwami nabanye abantu kube mnandi kakhulu futhi njengebhonasi eyengeziwe ngithola ukwaneliseka okukhulu emsebenzini wami. Ngijabule kakhulu ngemiphumela yami futhi ngincoma lesifundo kuwo wonke umuntu!”
"Lezi zifundo zingivumele ukuthi ngidale inala kuyo yonke imikhakha yempilo yami. Ubudlelwano, iqiniso nokuxhumana [i-ARC] kwakha unxantathu lapho okuhlangenwe nakho kwami nabantu, izindawo nezinto kuguqulwa khona.
“Ngakha ubudlelwano bami nomqondo wami wokungahluleli lapho ngibheka indawo engizungezile. Ngibona izinto zinjengoba zinjalo hhayi ngoba zingezona; Ngibona abantu ukuthi bangobani hhayi ukuthi bangobani. Ngakho ke, umuzwa wami wokuthokozela umhlaba uyinjabulo nje!
“Uma ngikhuluma noma ngingaxhumani nabantu, ngiyazi ukuthi ubudlelwano bami kanye / noma iqiniso lami lihambisana noma alihambisani nabanye abantu futhi konke esikwenzayo ukumisa kabusha unxantathu we-ARC ukuqonda kabanzi!
“Okunye engikubonile ukuthi ngibe nesibopho ngokwengeziwe, ngiyaqaphela ukuthi ngiyimbangela endabeni yempilo yami. Umbuzo ebengijwayele ukuzibuza wona ukuthi yini ebalulekile kimi? Kukhona umndeni wami, umsebenzi wami, impilo yami, ubuhlobo bami bothando. Futhi lezo zindawo zempilo yami engizibophezele ukuthi ngizosebenza kuzo ukuze ngakhe ukuqonda okwengeziwe nangonxantathu we-ARC. Ngiyabonga."